अधिकारकर्मी परियारलाई अम्बेडकर अवार्ड
काठमाडौं, ३ वैशाख । मानव अधिकारकर्मी डा. बिष्णुमाया परियार डाक्टर अम्बेडकर अवार्डबाट सम्मानित भएकी छिन् ।
भारतको संविधानका निर्माता डाक्टर भीम राव अम्बेडकरको १ सय २७ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा डा. परियालाई अमेरिकामा सम्मान गरिएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको डिपार्टमेन्ट अफ इकोनोमिक्स एण्ड सोसल अफेयर्सको सहकार्यमा फाउण्डेशन अफ ह्युमन होराइजन संस्थाले न्युयोर्कमा आयोजित विशेष कार्यक्रमा डा. परियारलाई सम्मान गरेको हो । यस्तै संस्थाले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न देशका अभियन्तालाई पनि सम्मान गरेको छ । न्युजर्सी सिटीका मेयरकी सल्लाहकार समेत रहेकी डा. परियारले नेपालमा महिला, दलित र बालबालिकाको सशक्तिकरण र शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी छिन् ।
रेशमलाल चौधरीलाई भोली सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराइने
काठमाडौं, ३० साउन । हाल काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित सदरखोर कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको पेशी भोली हुने जनाइएको छ । अधिवक्ता गजेन्द्र केसीका अनुसार भोली सर्वोच्च अदालतले पेशी तोकेको हो ।
‘वीरगञ्ज–काठमाडौं रेल मार्ग भारतको उच्च प्राथमिकतामा’
वीरगन्ज, ३० साउन । वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका महावाणिज्यदूत बिसी प्रधानले भारत सरकारले वीरगञ्ज काठमाडौं रेल मार्ग निर्माण परियोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
पशुपतिमा ४०० बेडको धर्मशाला ओली र मोदीले उदघाटन गर्ने
काठमाडौं, ३० साउन । पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा ४०० बेडको धर्मशाला तयार भएको छ । यसको आगामी भदौ १५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ ।
स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसूति केन्द्र स्थापना हुने : मन्त्री यादव
काठमाडौं, ३० साउन । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् ’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
‘फोहरलाई मोहर’ बनाउन झापाका पाँच नगरपालिका एकजुट
झापा, ३० साउन । फोहरमैला व्यवस्थापन गर्न झापाका पाँच नगरपालिका सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने भएका छन् । फोहरमैला मुख्य चुनौतीका रुपमा देखिन थालेपछि त्यसको व्यवस्थापनसँगै ‘फोहरलाई मोहर’ बनाउन नगरपालिका एकजुट भएका हुन् ।